စာအုပ်အမည် = ပရက်ရှပ်စ်မန်မို
စာရေးသူ = ချိုပိန်းနောင်
စာမျက်နှာ = ၁၁၉
တန်ဖိုး = ၂၀၀၀ ကျပ်
နှစ်ကာလများ စာပေမှ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ လတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်
စာအုပ်အပြင်အဆင်လေးကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဖွင့်ဖတ်ချင်စရာ။ ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကအရောင်းရဆုံးစာရင်းထဲဝင်ခဲ့သေးတယ်။ ဆရာမ ချိုပိန်းနောင် ကို စသိတာက သမီး ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးနဲ့။
အဲဒီဝတ္ထုတိုလေး ဖတ်လိုက်ရကတည်းက ဆရာမရဲ့အရေးအသား
တွေကို နှစ်ခြိုက်မိခဲ့တယ်။အရင်ကလဲ ဆရာမ စာအုပ်တွေ ထွက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ပထမဆုံး ဖတ်ဖူးခြင်းပါ။ တစ်အုပ်ဆိုလည်း ဆိုသလောက်ပါပဲ။ ဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာများဗျာ။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ပြုံးလာတဲ့အထိ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာတွေ၊ အံ့ဩတုန်လှုပ် မိတာ တွေ၊ နှလုံးသားကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းဖျစ်ညစ်လိုက်သလို နာကျင်ခံစားရတာတွေ၊ ကျောချမ်းမိစရာ အကြောင်းတွေ၊
ရုတ်တရက် မျက်ရည်ဝဲမိတာတွေ ရသတွေ အများအပြားပါပဲ။
ဆရာမနဲ့ နီးစပ်ပတ်သက်ရာ မိဘဆွေမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း
တွေ၊ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ခရီးတွေအကြောင်းနဲ့ ဆရာမရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့မှု တစ်စွန်းတစ်စ တွေကို ပေါင်းစပ်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်နေရင်း စဉ်းစားမိနေတာက ဆရာမ ဘယ်လို ခွန်အားတွေနဲ့ ဒီနေ့အထိ ရှင်သန်ရပ်တည် ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။
မိဘဆွေမျိုး ဆိုတဲ့ အနီးကပ်ဆုံး သူတွေရဲ့ လျစ်လျူရှု ဥပေက္ခာ တွေကြား၊ စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေကြား၊ ကျွန်တော်တို့ မတွေးမိတဲ့ အပြုအမူတွေကြား မထင်ထားရလောက်တဲ့ ဝေဒနာဒဏ်ချက်တွေ အကြောင်း မွန်းကျပ်ဖို့ကောင်းအောင် ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်ရပ်အမှန်တွေပါ။ ရင်ဘတ်ထဲ အထိခိုက်ရဆုံးက သူ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် အကြောင်းတွေပါ။ ရှားရှားပါးပါး ရခဲ့တဲ့ ဘဝတူ သူငယ်ချင်းတွေ ရုတ်တရက် အဝေးဆုံးတွေ ထွက်သွားကြတဲ့အချိန် ဘယ်လိုတွေများ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဆရာမ ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝကို ရင်မောခဲ့ရတယ်။
စာအုပ်ပါးပါးလေးဟာ တကယ့်ကို ခံစားစရာအများအပြားကို ပေးခဲ့တာပါ။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းပုံစံ စာစုတွေကလည်း ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဆရာမ က မွန်းကြပ်စရာ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားထဲ ပြုံးချင်စရာ၊ ကြည်နူးစရာ ဇာတ်ကြောင်းလေးတွေ ကြားညှပ်ထည့်ထားပေးခြင်းနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို မွန်းကြပ်လှောင်ပိတ်စေလိုက်၊ ကြည်နူးပြုံးရယ်စေလိုက်ဖြစ်အောင်
ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို အစကအဆုံးအထိ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သဘောပေါက်လိုက်တာကတော့
မေတ္တာတရား ရဲ့ အရေးပါ အသုံးဝင်မှု ကိုပါပဲ။ ဆရာမက မေတ္တာတရား ရဲ့ အဖိုးတန်ပုံကို သွယ်ဝိုက်ပြောပြသွားတာလို့ပဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ယူဆမိပါတယ်။ မဖတ်ရသေးသူတွေ ဝယ်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဝယ်မိလို့ နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။
စ, ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်၊ ဖတ်လက်စစာအုပ်တွေကြားထဲ
2019 အတွက် ပထမဆုံးတစ်ထိုင်ထဲဖတ်ရင်းပြီး
သွားတဲ့စာအုပ်ကတော့ စာရေးဆရာမ ချိုပိန်းနောင်ရဲ့
' ပရက်ရှပ်စ်မန်မို ' ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ! နောက်ပိုင်းရေးတဲ့
ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ ' ငါပြောချင်သမျှ
ငါ့အကြောင်း ' လိုစာအုပ်မျိုးပေါ့လေ။
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ဆန်ဆန်၊ semibiography ဆန်ဆန်
ဖြစ်တဲ့ ' ပရက်ရှပ်စ်မန်မို ' ကိုဖတ်ရတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ဘဝ
ကိုယ့်ကို အသက်ရှုကြပ်စေတာအမှန်ပါပဲ! ဒုတိယ
တဲ့သူမျိုး၊ အထူးသဖြင့်မိဘဆိုတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂ ါနဲ့မညီပဲ
မိဘဖြစ်နေတဲ့သူတိုင်းကို ကိုယ်မုန်းပါတယ်။ အကယ်၍
စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ အခန်း ၁ ကနေ ၃၂
ဘဝ၊ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ၊ အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၊
ပရက်ရှပ်စ်မန် (Precious Memo) လို့နာမည်ပေးထား
မဆိုလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ precious memo
သမီးငယ်လေးအအိကျန်ရဲ့ precious memo တွေ
တယ်လေ။ .... ။